Ultraboost Parley ဖိနပ်က ကမ္ဘာ့ရေထုကို ထိန်းသိမ်းရာရောက်တယ်တဲ့
14 Aug 2018 . 4:38 PM
Adidas ချစ်သူများ အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ အရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ပို့စ်ရဲ့အကြောင်းအရာမစတင်ခင်မှာ စကားဦးသန်းတဲ့အနေနဲ့ Adidas ရဲ့မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်တွေကို အသိပေးချင်တာလေး ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Adidas နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်သားဖွယ်ရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ဗဟုသုတအပိုင်းအစလေးတွေကို လတိုင်းလတိုင်း ပေ့ခ်ျမှာ ပုံမှန်မျှဝေပေးနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ Adidas ကို ဟိုးအရင်ကတည်းက အစဉ်တစိုက်အားပေးလာတဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ Adidas အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အထွေအထူး ရှင်းပြနေစရာမလိုအောင် Brand ဗဟုသုတကြွယ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Adidas ချစ်သူတွေဟာ အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ပြည့်မှီတဲ့အရည်အသွေး၊ သူမတူတဲ့အားသာချက်တွေနဲ့ အသုံးတည့်မှု ကောင်းကျိုးတွေကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သူတွေ ဖြစ်ကြပြီး ရွေးချယ်စရာ အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထဲကမှ ဘာကြောင့် Adidas ကိုရွေးချယ်သင့်သလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အားလုံးဗဟုသုတဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ့် Adidas ဟာ ဟိုးအရင် Brand စတင်ထူထောင်တဲ့အချိန်ကတည်းက နယ်ပယ်အရပ်ရပ်က ပညာရှင်တွေနဲ့ လက်တွဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ အားလုံးလည်းသိကြမှာပါ။ ဒီပို့စ်နဲ့အတူ Adidas ချစ်သူတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Parley နဲ့ Adidas တို့ အတူပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ပြင်ရေထုကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် တစ်ပုံချင်းစီထောက်ပြီး ဖတ်ရှုပေးကြပါဦး။
Parley ပင်လယ်ပြင်နဲ့ သမုဒ္ဒရာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဒါမှမဟုတ် Parley For The Oceans
Parley ဆိုတာဟာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ပညာရှင်တွေ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးသူခေါင်းဆောင်တွေ စုဝေးပြီး ကမ္ဘာမြေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အထူးသဖြင့် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့အလှတရားမပျက်စီးစေဖို့နဲ့ လုံခြုံမှုတည်မြဲစေဖို့အတွက် လူထုအသိပေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဆောင်တဲ့ နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပြင်မှာ သောင်တင်နေတဲ့ စွန့်ပစ်ပလက်စတစ်အမှိုက်ပေါင်းများစွာဟာ အလေးချိန်တန်ပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ခန့်ရှိနေပြီး အဲဒီပမာဏဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံထက် သုံးဆပိုကြီးမားပါတယ်။ မျက်ကွယ်ပြုထားလို့မရလောက်အောင် တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ရေထုညစ်ညမ်းခြင်းဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အလားအလာရှိပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တက်ကြွတဲ့လှုပ်ရှားသူတွေဟာ Parley For The Oceans ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကိုလက်စွဲကိုင်ပြီး လူသားတွေရဲ့စည်းကမ်းမဲ့မှုကြောင့် ညစ်ညမ်းနေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့ အနာဂတ်မှာကျရောက်လာမယ့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကသိရှိသွားစေဖို့ လူ့ရပ်ဝန်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အသိပညာပေးမှုတွေ တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Addidas × Parley
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ Adidas x Parley လက်တွဲမှု
ကမ္ဘာကြီးနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ Adidas ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Parley For The Oceans နဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ညစ်ညမ်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့ ကမ္ဘာ့ရေထုကို အထိရောက်ဆုံးအကျိုးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ Parley ဘက်က အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်စွန့်တဲ့ လူသားတွေကြောင့် သမုဒ္ဒရာအလှတရားဟာ တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းပျက်စီးလာပြီး ရေအောက်မှာရှင်သန်တဲ့ အဏ္ဏဝါသတ္တဝါတွေ မျိုးတုန်းမယ့်အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ သိရှိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Parley ဘက်ကပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို လူထုကြားမှာ အလျင်မြန်ဆုံး ပြန့်နှံ့စေဖို့အတွက် စားသုံးသူနဲ့ ဈေးကွက်ရဲ့သဘောသဘာဝကို ကောင်းမွန်စွာနားလည်တဲ့ Adidas ဟာ အနုပညာနဲ့ ဖက်ရှင်လောကတို့ကစပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိမယ်ဆိုတာကို မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာစပြီး ရေပေါ်ရေအောက်မှာ သောင်တင်နေတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပလက်စတစ်တွေကို ပြန်လည်ဆယ်ယူအသုံးပြုခြင်းကနေ အရည်အသွေးမြင့် ဖိနပ်ထုတ်ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ စီမံကိန်းဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကို အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ အမှိုက်တွေကနေတဆင့် ဖိနပ်သားရက်လုပ်တဲ့ ချည်မျင်တွေအဖြစ်သို့
စီမံကိန်းစတင်ချိန် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကစပြီး သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်ပေါင်းများစွာရဲ့ အားထုတ်မှုရလဒ်ကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ပင်လယ်ပြင်စွန့်ပစ်အမှိုက်တွေ၊ ပလက်စတစ်တွေနဲ့ ရေသန့်ဘူးခွံပေါင်းများစွာကို အရည်အသွေးမြင့် Adidas ဖိနပ်ပြုလုပ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Adidas နဲ့ Parley ဟာ ကမ္ဘာ့ကမ်းရိုးတန်းအရပ်ဒေသတွေမှာ နစ်မြုပ်သောင်တင်နေတဲ့ ပလက်စတစ်အမှိုက်တန်ပေါင်းများစွာကို ဆယ်ယူဖယ်ရှားပြီး A.I.R Strategy (Avoid, Intercept, Redesign) ဆိုတဲ့ စနစ်သစ်နဲ့ ပင်လယ်ပြင်အမှိုက်တွေကို ဖိနပ်သားရက်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ချည်မျင်တွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ Adidas နဲ့ Parley တို့လက်တွဲမှုဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ အဏ္ဏဝါလောကကို အကျည်းတန်ရုပ်ဆိုးစေတဲ့ အမှိုက်သရိုက်နဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏမြောက်မြားစွာကို အရည်အသွေးမြင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့သဘာဝတရားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စွမ်းရည်မြင့် Adidas x Parley Ultraboost ဖိနပ်စီးရီး
Adidas နဲ့ Parley တို့ တွဲဖက်ပါတနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ လူသိများထင်ရှားလာတဲ့ ပူးပေါင်းဖန်တီးမှုတစ်ခုကတော့ နာမည်ကျော် Adidas Ultraboost ဖိနပ်အမျိုးအစားကို Parley ပလက်စတစ်တွေအသုံးပြုပြီး Ultraboost Parley ဆိုတဲ့ ဖိနပ်စီးရီးသစ်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ရေမျက်နှာပြင်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ စိမ်းပြာရောင်ချည်မျင်တွေနဲ့ ဖိနပ်ရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသော Primeknit သားတွေကို ချူပ်လုပ်ထားတဲ့ Ultraboost Parley ဖိနပ်စီးရီးမှာ UltraBOOST Parley, Ultraboost Uncaged Parley နဲ့ UltraBOOST X Parley ဆိုပြီး နဂိုရှိနှင့်ပြီးသား Ultraboost မော်ဒယ်သုံးမျိုးကို Parley နည်းပညာနဲ့ ထပ်မံပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိနပ်တစ်ရံချင်းစီရဲ့ ဖိနပ်ကြိုး၊ ခြေဖနောင့်နင်းကွက်နဲ့ ဖိနပ်အနားသားတွေမှာ ပလက်စတစ်ရေသန့်ဘူးခွံ ၁၁ ခွံက ရရှိတဲ့ ကုန်ကြမ်းချည်းသီးသန့် အသုံးပြုထားတဲ့ ဒီ Ultraboost Parley ဖိနပ်စီးရီးကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဝန်းကျင်တန်ဖိုးနဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ဆီ စတင်ဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ တရွေ့ရွေ့သွားနေဆဲ Adidas x Parley
Adidas အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၇ အထိ Parley နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ Ultraboost Parley ဖိနပ်အရံပေါင်း ၁ မီလီယံ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Adidas ရဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်ဟာ မြင့်မားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသမျှ Parley ဖိနပ်တစ်ရံချင်းစီမှာ ရေထုကိုညစ်ညမ်းစေမယ့် ပလက်စတစ်ဘူးခွံပေါင်း ၁၁ ဘူးပါဝင်တာကြောင့် တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စွန့်ပစ်ပလက်စတစ်ဘူးခွံပေါင်း ၁၁ မီလီယံကို ပင်လယ်ပြင်မှာသောင်တင်နေစေမယ့်အစား ဖိနပ်ပြုလုပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့တာပါပဲ၊ တစ်နည်းပြောမယ်ဆိုရင် စွန့်ပစ်ပလက်စတစ်ဘူးပေါင်း ၁၁ မီလီယံ လျော့ကျသွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Ultraboost Parley ဖိနပ်တစ်ရံကိုဝယ်ယူခြင်းဟာ ကမ္ဘာ့ရေထုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိုတဲ့ သဘောကိုဆောင်နေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ Adidas နဲ့ Parley တို့ပူးပေါင်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့အတူ Run For The Oceans တာရှည်ပြေးပွဲကို တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို နောင်လာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာလည်း နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ မှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ပလက်စတစ်အမှိုက်တွေကို နည်းစနစ်ကျကျ ဆယ်ယူပြီး ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ လိုအပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ကဲ အခု စာဖတ်နေတဲ့ Adidas ချစ်ပရိသတ်တွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါရဲ့လား? Ultraboost Parley ဖိနပ်ဝယ်မှ၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားပြီး အမှိုက်ရှင်းမှရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့တဲ့ပလက်စတစ်အမှိုက်တွေကို အမှိုက်ပုံးထဲ စနစ်တကျထည့်ပေးပါ၊ ပလက်စတစ်အိတ်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး မသုံးဖြစ်အောင်နေကြည့်ပါ၊ သုံးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို ဒီပို့စ်အတူနဲ့ ပလက်စတစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ၊ အခုလိုရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့ အခုပဲစလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကို ပြောပြလိုက်ပါရစေ။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုခဲ့တဲ့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တိုင်းက Adidas ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကို အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။ အခုဖော်ပြခဲ့တာကတော့ Adidas နဲ့ Parley တို့ရဲ့လက်တွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြီး အခုလိုပို့စ်မျိုးတွေကို အချိန်မှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ ပေ့ခ်ျမှာစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Ultraboost Parley ဖိနပျက ကမ်ဘာ့ရထေုကို ထိနျးသိမျးရာရောကျတယျတဲ့
Adidas ခဈြသူမြား အားလုံးကို မင်ျဂလာပါလို့ အရငျဆုံးနှုတျဆကျလိုကျပါတယျ။ ပို့ဈရဲ့အကွောငျးအရာမစတငျခငျမှာ စကားဦးသနျးတဲ့အနနေဲ့ Adidas ရဲ့မိတျဟောငျးမိတျသဈတှကေို အသိပေးခငျြတာလေး ရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ Adidas နဲ့ပတျသကျတဲ့ မှတျသားဖှယျရာ၊ စိတျဝငျစားစရာ ဗဟုသုတအပိုငျးအစလေးတှကေို လတိုငျးလတိုငျး ပခြေျ့မှာ ပုံမှနျမြှဝပေေးနတေယျဆိုတာပါပဲ။ Adidas ကို ဟိုးအရငျကတညျးက အစဉျတစိုကျအားပေးလာတဲ့ ပရိသတျတှဟော Adidas အမှတျတံဆိပျနဲ့ ပတျသကျလာရငျ အထှအေထူး ရှငျးပွနစေရာမလိုအောငျ Brand ဗဟုသုတကွှယျသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Adidas ခဈြသူတှဟော အမှတျတံဆိပျရဲ့ ပွညျ့မှီတဲ့အရညျအသှေး၊ သူမတူတဲ့အားသာခကျြတှနေဲ့ အသုံးတညျ့မှု ကောငျးကြိုးတှကေို ကောငျးစှာနားလညျသဘောပေါကျသူတှေ ဖွဈကွပွီး ရှေးခယျြစရာ အမှတျတံဆိပျပေါငျးမြားစှာရှိတဲ့အထဲကမှ ဘာကွောငျ့ Adidas ကိုရှေးခယျြသငျ့သလဲဆိုတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိသူတှဖွေဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး အားလုံးဗဟုသုတဖွဈတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတဈခု ရှေးခယျြထားပါတယျ။ တဈခြိနျမှာ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးစာရငျးဝငျ ကုနျအမှတျတံဆိပျတဈခုဖွဈလာမယျ့ Adidas ဟာ ဟိုးအရငျ Brand စတငျထူထောငျတဲ့အခြိနျကတညျးက နယျပယျအရပျရပျက ပညာရှငျတှနေဲ့ လကျတှဲမှုတှေ လုပျဆောငျခဲ့တာ အားလုံးလညျးသိကွမှာပါ။ ဒီပို့ဈနဲ့အတူ Adidas ခဈြသူတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးသှားမှာကတော့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့အစညျးဖွဈတဲ့ Parley နဲ့ Adidas တို့ အတူပူးပေါငျးပွီး ကမ်ဘာ့ပငျလယျပွငျရထေုကို ထိနျးသိမျးကာကှယျစောငျ့ရှောကျခဲ့တဲ့ အကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။ အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီဆိုရငျ တဈပုံခငျြးစီထောကျပွီး ဖတျရှုပေးကွပါဦး။
Parley ပငျလယျပွငျနဲ့ သမုဒ်ဒရာထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေးအဖှဲ့အစညျး ဒါမှမဟုတျ Parley For The Oceans
Parley ဆိုတာဟာ အနယျနယျအရပျရပျက ပညာရှငျတှေ၊ စှနျ့ဦးတီထှငျသူတှနေဲ့ လှမျးမိုးသူခေါငျးဆောငျတှေ စုဝေးပွီး ကမ်ဘာမွေ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ အထူးသဖွငျ့ ပငျလယျသမုဒ်ဒရာကွီးရဲ့အလှတရားမပကျြစီးစဖေို့နဲ့ လုံခွုံမှုတညျမွဲစဖေို့အတှကျ လူထုအသိပေးလှုပျရှားမှုတှလေုပျဆောငျတဲ့ နယူးယောကျမွို့အခွစေိုကျ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့အစညျးဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာပွငျမှာ သောငျတငျနတေဲ့ စှနျ့ပဈပလကျစတဈအမှိုကျပေါငျးမြားစှာဟာ အလေးခြိနျတနျပေါငျး ၈၀,၀၀၀ ခနျ့ရှိနပွေီး အဲဒီပမာဏဟာ ပွငျသဈနိုငျငံထကျ သုံးဆပိုကွီးမားပါတယျ။ မကျြကှယျပွုထားလို့မရလောကျအောငျ တဖွညျးဖွညျးကွီးထှားလာနတေဲ့ ကမ်ဘာ့ရထေုညဈညမျးခွငျးဟာ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြးစီအပွငျ တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ အလားအလာရှိပွဿနာတဈရပျ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ တကျကွှတဲ့လှုပျရှားသူတှဟော Parley For The Oceans ဆိုတဲ့ ဆောငျပုဒျကိုလကျစှဲကိုငျပွီး လူသားတှရေဲ့စညျးကမျးမဲ့မှုကွောငျ့ ညဈညမျးနတေဲ့ပငျလယျပွငျကွီးနဲ့ အနာဂတျမှာကရြောကျလာမယျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျတှကေို တဈကမ်ဘာလုံးကသိရှိသှားစဖေို့ လူ့ရပျဝနျးဆိုငျရာလှုပျရှားမှုတှေ၊ အသိပညာပေးမှုတှေ တဈစိုကျမတျမတျ လုပျဆောငျပါတယျ။
သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို အကြိုးပွုမယျ့ ရညျရှယျခကျြကိုယျစီနဲ့ Adidas x Parley လကျတှဲမှု
ကမ်ဘာကွီးနဲ့မကျြခွမေပွတျတဲ့ Adidas ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ Parley For The Oceans နဲ့ လကျတှဲပူးပေါငျးခဲ့ပွီး ညဈညမျးမှုတှနေဲ့ပွညျ့နတေဲ့ ပငျလယျပွငျကွီးနဲ့ ကမ်ဘာ့ရထေုကို အထိရောကျဆုံးအကြိုးပွုနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကိုရှာဖှခေဲ့ပါတယျ။ Parley ဘကျက အဓိကရညျရှယျခကျြကတော့ စညျးကမျးမဲ့ အမှိုကျစှနျ့တဲ့ လူသားတှကွေောငျ့ သမုဒ်ဒရာအလှတရားဟာ တဖွညျးဖွညျး ယိုယှငျးပကျြစီးလာပွီး ရအေောကျမှာရှငျသနျတဲ့ အဏ်ဏဝါသတ်တဝါတှေ မြိုးတုနျးမယျ့အန်တရာယျနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျဆိုတာကို တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ သိရှိစဖေို့ဖွဈပါတယျ။ Parley ဘကျကပေးခငျြတဲ့ မကျဆခြေျ့ကို လူထုကွားမှာ အလငျြမွနျဆုံး ပွနျ့နှံ့စဖေို့အတှကျ စားသုံးသူနဲ့ ဈေးကှကျရဲ့သဘောသဘာဝကို ကောငျးမှနျစှာနားလညျတဲ့ Adidas ဟာ အနုပညာနဲ့ ဖကျရှငျလောကတို့ကစပွီး လူထုလှုပျရှားမှုတှေ စတငျလုပျဆောငျမယျဆိုရငျ ပိုမိုထိရောကျမှုရှိမယျဆိုတာကို မွငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီမှာစပွီး ရပေျေါရအေောကျမှာ သောငျတငျနတေဲ့ စှနျ့ပဈပစ်စညျးပလကျစတဈတှကေို ပွနျလညျဆယျယူအသုံးပွုခွငျးကနေ အရညျအသှေးမွငျ့ ဖိနပျထုတျကုနျကွမျးအဖွဈ ပွောငျးလဲပဈဖို့ စီမံကိနျးဆှဲ အကောငျအထညျဖျောခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာကွီးကို အန်တရာယျပွုနတေဲ့ အမှိုကျတှကေနတေဆငျ့ ဖိနပျသားရကျလုပျတဲ့ ခညျြမငျြတှအေဖွဈသို့
စီမံကိနျးစတငျခြိနျ ၂၀၁၅ ခုနှဈကစပွီး သကျဆိုငျရာပညာရှငျပေါငျးမြားစှာရဲ့ အားထုတျမှုရလဒျကွောငျ့ နောကျဆုံးမှာတော့ ပငျလယျပွငျစှနျ့ပဈအမှိုကျတှေ၊ ပလကျစတဈတှနေဲ့ ရသေနျ့ဘူးခှံပေါငျးမြားစှာကို အရညျအသှေးမွငျ့ Adidas ဖိနပျပွုလုပျရာမှာအသုံးပွုတဲ့ ကုနျကွမျးပစ်စညျးတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့ပါတယျ။ Adidas နဲ့ Parley ဟာ ကမ်ဘာ့ကမျးရိုးတနျးအရပျဒသေတှမှော နဈမွုပျသောငျတငျနတေဲ့ ပလကျစတဈအမှိုကျတနျပေါငျးမြားစှာကို ဆယျယူဖယျရှားပွီး A.I.R Strategy (Avoid, Intercept, Redesign) ဆိုတဲ့ စနဈသဈနဲ့ ပငျလယျပွငျအမှိုကျတှကေို ဖိနပျသားရကျလုပျရာမှာ အသုံးပွုတဲ့ ခညျြမငျြတှဖွေဈလာစခေဲ့ပါတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ Adidas နဲ့ Parley တို့လကျတှဲမှုဟာ ကမ်ဘာမွကွေီးနဲ့ အဏ်ဏဝါလောကကို အကညျြးတနျရုပျဆိုးစတေဲ့ အမှိုကျသရိုကျနဲ့ စှနျ့ပဈပစ်စညျးပမာဏမွောကျမွားစှာကို အရညျအသှေးမွငျ့ လူသုံးကုနျပစ်စညျးဖွဈလာအောငျ ပွုလုပျနိုငျခဲ့ပွီး လူတှရေဲ့လိုအပျခကျြကို တဈထောငျ့တဈနရောကနေ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပငျလယျပွငျကွီးရဲ့သဘာဝတရားကို ကိုယျစားပွုတဲ့ စှမျးရညျမွငျ့ Adidas x Parley Ultraboost ဖိနပျစီးရီး
Adidas နဲ့ Parley တို့ တှဲဖကျပါတနာဖွဈပွီးတဲ့နောကျမှာ လူသိမြားထငျရှားလာတဲ့ ပူးပေါငျးဖနျတီးမှုတဈခုကတော့ နာမညျကြျော Adidas Ultraboost ဖိနပျအမြိုးအစားကို Parley ပလကျစတဈတှအေသုံးပွုပွီး Ultraboost Parley ဆိုတဲ့ ဖိနပျစီးရီးသဈကို ထုတျလုပျခဲ့တာပါပဲ။ ကမ်ဘာ့ရမေကျြနှာပွငျကိုထငျဟပျတဲ့ စိမျးပွာရောငျခညျြမငျြတှနေဲ့ ဖိနပျရဲ့ ၉၅ ရာခိုငျနှုနျးသော Primeknit သားတှကေို ခြူပျလုပျထားတဲ့ Ultraboost Parley ဖိနပျစီးရီးမှာ UltraBOOST Parley, Ultraboost Uncaged Parley နဲ့ UltraBOOST X Parley ဆိုပွီး နဂိုရှိနှငျ့ပွီးသား Ultraboost မျောဒယျသုံးမြိုးကို Parley နညျးပညာနဲ့ ထပျမံပေါငျးစပျထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဖိနပျတဈရံခငျြးစီရဲ့ ဖိနပျကွိုး၊ ခွဖေနောငျ့နငျးကှကျနဲ့ ဖိနပျအနားသားတှမှော ပလကျစတဈရသေနျ့ဘူးခှံ ၁၁ ခှံက ရရှိတဲ့ ကုနျကွမျးခညျြးသီးသနျ့ အသုံးပွုထားတဲ့ ဒီ Ultraboost Parley ဖိနပျစီးရီးကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ မလေ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ ဒျေါလာ ၂၀၀ ဝနျးကငျြတနျဖိုးနဲ့ ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျဆီ စတငျဖွနျ့ခြိပေးခဲ့ပါတယျ။
ဆကျလကျလုပျဆောငျသှားမယျ့ အနာဂတျစီမံကိနျးတှနေဲ့ တရှရှေ့သှေ့ားနဆေဲ Adidas x Parley
Adidas အနနေဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈကနေ ၂၀၁၇ အထိ Parley နဲ့လကျတှဲခဲ့တဲ့ နှဈနှဈတာကာလအတှငျးမှာ Ultraboost Parley ဖိနပျအရံပေါငျး ၁ မီလီယံ ထုတျလုပျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ Adidas ရဲ့ ကုနျထုတျစှမျးရညျဟာ မွငျ့မားတယျလို့ဆိုနိုငျပွီး ထုတျလုပျထားသမြှ Parley ဖိနပျတဈရံခငျြးစီမှာ ရထေုကိုညဈညမျးစမေယျ့ ပလကျစတဈဘူးခှံပေါငျး ၁၁ ဘူးပါဝငျတာကွောငျ့ တှကျကွညျ့မယျဆိုရငျ စှနျ့ပဈပလကျစတဈဘူးခှံပေါငျး ၁၁ မီလီယံကို ပငျလယျပွငျမှာသောငျတငျနစေမေယျ့အစား ဖိနပျပွုလုပျတဲ့ကုနျကွမျးအဖွဈ အစားထိုးအသုံးပွုခဲ့တာပါပဲ၊ တဈနညျးပွောမယျဆိုရငျ စှနျ့ပဈပလကျစတဈဘူးပေါငျး ၁၁ မီလီယံ လြော့ကသြှားခွငျးလညျးဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ Ultraboost Parley ဖိနပျတဈရံကိုဝယျယူခွငျးဟာ ကမ်ဘာ့ရထေုနဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျလိုတဲ့ သဘောကိုဆောငျနပေါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈအတှငျးမှာပဲ Adidas နဲ့ Parley တို့ပူးပေါငျးပွီး သဘာဝပတျဝနျးကငျြအရေးလှုပျရှားသူမြားနဲ့အတူ Run For The Oceans တာရှညျပွေးပှဲကို တကျညီလကျညီ ဆောငျရှကျခဲ့သလို နောငျလာမယျ့ငါးနှဈအတှငျးမှာလညျး နိုငျငံပေါငျး ၄၀ မှာရှိတဲ့ ပငျလယျပွငျပလကျစတဈအမှိုကျတှကေို နညျးစနဈကကြ ဆယျယူပွီး ကုနျကွမျးအဖွဈ ပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျစဖေို့ လိုအပျတဲ့စီမံကိနျးတှေ ဆောငျရှကျနပေါတယျ။
ကဲ အခု စာဖတျနတေဲ့ Adidas ခဈြပရိသတျတှေ ကိုယျတိုငျလညျး ဒီလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျနိုငျတယျဆိုတာ သိပါရဲ့လား? Ultraboost Parley ဖိနပျဝယျမှ၊ ပငျလယျကမျးခွသှေားပွီး အမှိုကျရှငျးမှရယျလို့ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ တှတေဲ့ပလကျစတဈအမှိုကျတှကေို အမှိုကျပုံးထဲ စနဈတကထြညျ့ပေးပါ၊ ပလကျစတဈအိတျတှကေို အတတျနိုငျဆုံး မသုံးဖွဈအောငျနကွေညျ့ပါ၊ သုံးဖွဈခဲ့ရငျလညျး စနဈတကစြှနျ့ပဈပါ၊ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှကေို ဒီပို့ဈအတူနဲ့ ပလကျစတဈရဲ့ဆိုးကြိုးတှေ ပွနျလညျမြှဝပေေးပါ၊ အခုလိုရိုးရှငျးတဲ့အခကျြလေးတှနေဲ့ အခုပဲစလို့ ပတျဝနျးကငျြကိုအကြိုးပွုနိုငျပါတယျဆိုတာကို ပွောပွလိုကျပါရစေ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုခဲ့တဲ့ အနယျနယျအရပျရပျတိုငျးက Adidas ခဈြပရိသတျတှအေားလုံးကို အမွဲတမျးကြေးဇူးတငျလကျြပါ။ အခုဖျောပွခဲ့တာကတော့ Adidas နဲ့ Parley တို့ရဲ့လကျတှဲမှုဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျပွီး အခုလိုပို့ဈမြိုးတှကေို အခြိနျမှနျတငျဆကျပေးသှားမှာမို့ ပခြေျ့မှာစောငျ့ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ အားလုံးပဲ ပြျောရှငျဖို့ကောငျးတဲ့ နလေ့ေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။